युवा वर्ग देश विकासको साझेदार र राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सकेन - Bidur Khabar
युवा वर्ग देश विकासको साझेदार र राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सकेन
विदुर खबर २०७६ साउन २८ गते २०:१०
नुवाकोट, वर्तमान सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको छ । तर सरकारले नारालाई सार्थक बनाउन स्पष्ट आधार भने तयार गर्न सकेको छैन । सरकारको यो नारालाई सफल बनाउन नेपालका युवा जनशक्ति प्रमुख माध्यम बन्न सक्छन् । तर समृद्धिका लागि युवाहरुलाई राष्ट्र निमार्णमा परिचालन गर्न नसकिएको युवाहरुको गुनासो छ ।
संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिकोणले युवावर्गलाई मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्गका रुपमा लिइन्छ । जुन देशले युवा जनसंख्यालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो विकासमा उपयोग गर्न सक्छ, त्यही देशको आर्थिक विकास उच्चदरले हुने गर्छ । तर त्यहि युवा बर्ग भने नेपालमा विकासको साझेदार र राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सकेका छैनन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सरकारको लक्ष्य र सपना हो । तर समृद्धिको लागि न्यूनतम आधार र मापदण्ड के हो ? सरकारले स्पष्ट खाका बाहिर ल्याएको छैन ।
यो लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले युवाहरुलाई अत्यधिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाईदैन । जबसम्म सरकारले उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रनिमार्णमा परिचालन गर्न सक्दैन तबसम्म समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता नपाउने आमयुवाहरुको बुझाई छ ।शैक्षिक बेरोजगारीले ग्रसीत नेपालका युवाहरु अझैपनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोडिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपाल परनिर्भर छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा युवालाई नलगाएसम्म समृद्ध नेपालको नारा नारामा मात्र सिमित रहने युवाहरुको भनाई छ ।
नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई युवा मानेका छन् । जस अनुसार नेपालको जनगणना २०६८ को तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा रहेका छन् ।
कुल जनसंख्याको यति विशाल जनशक्तिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण समृद्धिको नारा लक्ष्य भन्दा टाढा देख्छन युवाहरु । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुलाई समेट्न सकेपनि व्यवहारीक रुपमा त्यसको कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु राम्रा भए पनि असफल भइरहेका छन् । जसले गर्दा युवाहरुले स्वदेशमा सम्भावना देखिरहेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको समृद्धि र विकासमा परिरेको छ ।युवाहरु विकास र परिवर्तनका संवाहक हुन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य भेट्न युवा क्रियाशीलतालाई बढाउनु पर्ने हुन्छ तर युवाहरु, आपूmहरुले त्यो भूमिका नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
के हो समृद्धि ? के का लागि समृद्धि ? समृद्धिको आधार र मापन के हो ? यसबारे स्पष्ट खाका ल्याई यसको संवाहक युवाहरुलाई नै बनाउनु पर्छ । जसले समृद्धिको आधार तयार पार्छ भन्ने आम बुझाई छ ।त्यसैले युवाहरुको जोश जाँगर, उर्जाशिलता, कार्यकुशलता र हौसलालाई भरपुर रुपमा उपयोग गर्न सरकारले ढिलो नगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ ।